Na-emegharịọhụrụ、OnyeMmepụtanke Freshworks、bụngwaọrụnlebanye anyadịmfe nantanetịnke na-amaliteọnụahịadịegwu-n’efu。 N’ihedịobere、ọga-enyeregịaka ileba anya otu saitiọbụladabere na isi iheabụọnkeọsọnzaghachi sava na oge.
E hiwere Freshworks na 2010 wee malite n’ihiahụmịhenkendịnwe ya。 Ngwaahịahambụ、Freshdesk、ka ewuru iji tinye marụkwaaọrụngụkọtakandịụrụweewepụtamgbalịndịahịaha.
Taa aga m elebakwuo anya n’otú esi aNgwáọrụnlerearụmọrụdịka Freshping nwere ike inyere akaazụmaahịagịma mikpu omimi n’ime ihehezọọnwereịnye.
2 GịnịMere O JiDịMkpa Ka NeedNa-achọEzumike?
2.2 2. Na-eme kandịahịanwee obiụtọ
3 OleeotúFreshping Na-enyere Aka
5 IheNdịỌrụNa-ekwu Banyere IjiNkụ
6 Mmechi：Ego ole kankwụghachigịbara uru?
Nyochaa njikwantụkwasịobi igodo nwere Freshping naakpaghịaka.
Ngwa ngwa ngwa ihedịkaafọiri na ezigbongwaahịaọmamechara、ha webatara Freshping。 Na usoro iwu、ntọalanke Freshping dping mfe-iji nyerendịụrụakahụna ebenrụọrụweebụhana-arụọrụnaọkwa.
Nke apụtarana ngwaahụna-enyochaweebụsaịtịndịa gwara ya ma na-eleba anya n’iheabụọdịmkpa onyena-elekọtaweebụga-achọ、oge nzaghachi sava ha na nnwetaweebụsaịtịha.
Ọna-eme nke a site na izipu ‘ping’（ya mere ahaahụ、Freshping）na savaahụn’otu nkeji、weedekọọ（a）maọbụrụna enwere nzaghachi na（b）ogologo oge o was savaweebụijiザガチ。 na-echekwa oziデータahụmgbeachọrọya、gosipụtaraya onyeọrụya na esereseọrụdịọcha.
GịnịMere O JiDịMkpa Ka NeedNa-achọEzumike?
Nwere ikeịnwetanlele nkennụnụnantanetịanya nkesaịtịgị.
Site nankọwaahụ、enyere m Freshpingọga-abụnaịga na-eche ihe mere ga ga-eji debanye aha makangwaọrụọzọna-enyeụdịatụmatụahụ。 Azịzayadịmfebụna Freshpingdịkwakarịakaọdị（karịana nkeahụmechara）.
Azịzanke ogologobụmaeleghịanya ihe ga-eme ka nku anyagịdịelu;
Ọbụrụnaịna-azụahịaazụmahịaọdịnalamandịọrụahịagịna-akpọkarịọrịa、nkeahụga ga-abụnchegbu makagị？クパムクパム？ Ndịna-azụahịagịbụebeụzọesi enweta ego si na otu aga na ebenrụọrụweebụgị.
N’ezie、ebenrụọrụweebụgịna-arụọrụdịka onye na-ebuteụzọ、ire ere、ahịa、nkwadondịahịa、na onyennọchianya ika ha niile abanye n’otu。 Ọbụrụnasaịtịgịenweghịntụkwasịobi、ịgaghịachọịmarama gbanwee？ man’adịghịkandịọrụoge、weebụsaịtịgịna-agba 24/7 ma nwee ike isi ike ilegide anya ebeọbụna ihe niile ‘na-agbaọsọ’ mgbe niile.
フレッシュナアグバエグウオキリキリmgbeịnyechara ya usoro ijiarụọrụ。 Ọna-eme kaịmara maọbụrụna enwere nsogbu、ọbụrụnaọbụghị、ọna-anọdụebeahụnaanịna-elele ma na-achịkọtadata kaịwee mee ihe mgbeọbụlaọdịgịkaọ.
Iji nweta echiche nke oke iwere ogeịnwereike iwere、kaanyịleba anya n’okwu Amazon.com。 Na 2018 n’oge Amazon Prime Day、ebenrụọrụweebụha malitere iche okwumetụtaraagbanwe agbanwe。 Ogeikpeazụnke 63、okwundịahụna-efu nnukwu onye na-ereahịaọnụego$ 72.4 nde na ego enwetara.
Ọbụezie naọnụọgụgụahụagaghịabụnkeịna-eche ihu、downtime ka ga-efuazụmahịagịmakasekọndọbụlaanaghịedozi ya。 Ijimụtaego oleịnwere ikeịnwemaọbụrụna ebenrụọrụweebụgịga-agbada、jiri usoro a wee meeatụmatụ：
Ego KwaAfọ/ OgeAzụmaahịagịxMmetụtaWebụsaịtịkaahịa％
Ugbu a、was ya naịbụazụmaahịatụkwasịrịobi na ebenrụọrụweebụgịmaka 100％nke egogị!
2. Na-eme kandịahịanwee obiụtọ
Na gburugburu ebe ana-azụahịataa、ọbụghịnaanịnaọdịmkpa iji nyerendịahịaakaịchọrọ、kamakwaịkwesịrịilekwasịanya na idobendịochie。 Nke apụtaranaafọojujundịahịadịmkpakarịamgbeọbụla。 Nrụọrụwebụsaịtịbụotu mpaghara ebe okwu adị.
Ọbụrụn’ị na-enyeọrụ、ndịahịana-enweghịikeịbanyena ya ga-enwe obiụtọ。 Nke apụtaranaịkwesịrịnma nkeji nke enwere nsogbu naweebụsaịtịgị、dịka oge downtime maọbụoge oge nzaghachi ihe nkesana-enweghịatụ.
Digital nwere ihekarịrịiwetaọrụngwa ngwa、o meekwala kandịọrụnwee ikeịnwetaọtụtụụzọnyiwe mkpesa banyere ya！ Ndịahịana-eche oge dowulant naweebụsaịtịgịagaghịegbu ogeịkpọgịna mgbasa ozi mgbasa ozi maọbụigwendịọzọ.
Ihekachasịnjọgbasara mkpesandịabụna habụndịnaha na eze ma ga-eyi ogologo oge mgbe edozichara nsogbuahụ、na-edugana-emetụtandịahịa。 Agbanyeghi na Freshpingenweghịike inye aka na nkeahụ、ọnwere ike inye aka mee kaịmata nkeji enwere nsogbu-ma nwee nchekwubeịnwere ike idozi ya tupu mkpesa amalite.
今までにgaala naweebụsaịtịwee nwee ikeịnwetaya？ Ọtụtụoge、ịga-emechitaabụihenchọgharịahụwee gaa na nkeọzọ。 Ekele makaọnụọgụgụweebụsaịtịdịukwuu nantanetị、enwereọtụtụọnụọgụọzọmaka ihe niile.
Ọbụrụna ebenrụọrụweebụgịenweghịike ijerendịahịaozi、ịnwere ike ijide n’aka naọtụtụga-ele anya ebeọzọwee ghara iji ndidi chere ka ebenrụọrụweebchigịbịagダウンタイムna-enyendịahịaobiọjọọ、ọkachasịndịọbịa.
OleeotúFreshping Na-enyere Aka
Na-agba ume kaanyịtinye ihentanetị50 iji nyochaa.
Nime obi ya、Freshping gbara gburugburuabụọbụisiyabụkaanyịlekwasịanya nandịahụ。 Iji jiri Freshping、ịga-eme ya debanye aha makaakaụntụ。 Enkere ikeịmenkeahụnaanịdịkaiji NJ Googlegịsonyere。 Mgbe nke agasịrị、ọbụnaanịmakaịgbakwunyeURL nantanetịịchọrọinyocha.
Datadịoke mkpa nke Freshpingchọrọbụadreesịweebụsaịtịgịnaadreesịoziịntanetịgị。 Ndịnke gara aga inyocha、na nkeikpeazụime kaịmata ma enwere nsogbuọbụla。 Ọbụrụna iweadịghịgị、nkeahụbụna、naanịiheịga-achọkagịna ya na –ekwu makaịdịmfe.
Makandịanyịkọwarankọwazuru ezu enwereụfọdụntọalaịnwere ikeịtugharị。 Ihendekọefu na-enyegịohere inyocha ruowebsaịtị50 na oge ping nke ma obu nkeji ise。 Nhọrọndịọzọdịeludịka nleba anya eriri nzaghachi、nloghachi koodu、ndịisiakụkọHTTP omenala、ọkwaọkwaoge、yana ihendịọzọdịnaatụmatụndụakwụọgwụ.
Maka onyeọrụbụisi、ọdịichekachasịga-abụnkekachasịn’ogologo oge echedoro dataahụ。 Ọbụrụnaịchọrọkarịaọnwaisii nke data iji zoo Zoo aka、ịga-edebanye aha makaatụmatụakwụụgwọhaọbụla。 M gbakwunye data bara urukarịamaọbụrụnaịna-agbakọya makaọmụmụihearụmọrụogologo oge.
Ihe ndi ozo ohuru na uchu banyereatụmatụugwo gunyere：
Inye ego makandịọrụkarịa（ihe makaazụmaahịa）
Actchọpụtana oge mmeziweebụ
Freshping na-enyendịụrụohereịdebanyeaha makaọkpọrọatụmatụ“ MgbeEbighịEbi” naịkwụwaakaọtọ、maka naọtụtụndịmmadụga-adịmma。 Still ka ga-eso metrik nkentụkwasịobi igodo、manaenwetaghịụfọdụatụmatụnaatụmatụakwụụgwọatụmatụna-enye.
Azụmaahịan’aka nkeọzọnwere ikeịkammaịdebanyeaha maka otu n’imeatụmatụha siakwụụgwọ。 Wezụgaanya mgbe niile、dataanakọtarasite na Freshping nwere ike ikwe kaịmụọọnụọgụgụogologo oge kaịwee nwee ikeịmenyocha oge.
Ihendịa ga-eme kaịmata ma enwere nsogbuịnwere ike iwulite ma nwee olile anya na enyemaka nkendịna-eweta Bochum、maọbụdịkachasịnjọ、tụleeMbugharịna onye na-eweta mba ba Atụmatụịkwụụgwọna-amalitedịka $ 11 kwaọnwamaọbụrụnaakwụụgwọya kwaafọ-enwere ezi uche zuru ezu maka obereazụmaahịaiji.
IheNdịỌrụNa-ekwu Banyere IjiNkụ
Kemgbe mmalite、Freshping enwetalaọtụtụnyochadịmma site n’akandịọrụ。 Kaanyịleba anya n’iheụfọdụndịọrụFreshping na-ekwu banyerengwaahịaa：
GỤKWUOonye nyocha nyocha na Freshping.
Mmechi：Ego ole kankwụghachigịbara uru?
評判ga-ejiọlaedo mara ezigbo aha ya makaọlaedo tumadin’ọgbọebendịahịana-ekwu okwuafọojuju makangwaahịanaọrụdịiche iche。 Site na ntinye akana-adịghịakwụụgwọọnweghịihe kpataragịiji debanye aha ma nwaleeọrụha ugbu a.
Aga m akwado kaịmalite naatụmatụebighi ebi ha n’efu wee nyochaghachi ma obere ogeịga-achọịkwagaotu n’imeụgwọhana-akwụụgwọ。 Ekwuwerị、ọbụn’efu na otunhọrọọzọịnwere ike iji nyere aka mee kantụkwasịobi nkeweebụsaịtịgịdịkwuoelu.
Ọbụrụnaịna-achọatamata ihe、Freshworks nwekwara nnukwuụlọanụna-akacha ewu ewungwaahịametụtara、nkekachasịn’inyeregịakaịgbanyeaka naịkwaliteazụmaahịa（g！ Lelee ibengwaahịaha ijihụebeọzọngwaahịaFreshworks nwere ike inyeregịaka igbo mkpaazụmahịama nyeụlọọrụgịmmụbana ike taa.
Cheta、ọbụrụnaịna-edighi nammepụtaiheọhụrụ、ọpụtarana onyegịna-asọmpina-abịan’ihu.